Wararka Gudaha – Page 243 – Shabakadda Amiirnuur
Golaha Wasiirada Ee Hir-Shabeelle Oo Jowhar Lagu Ansixiyay.
Baarlamaanka maamulka Hir-Shabeelle ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi ku ansixiyay golaha wasiirada cusub ee uu dhawaan soo magacaabay hogaamiye Maxamad Cabdi Waare. Kulanka oo ay soo xaadireen 79 xildhibaan ayaa waxaa ugu dambeyntii codkooda kalsoonida ah wasiirada siiyay 77 xildhibaan waxaana uu gudoomiyaha Baarlamaanku […]
Degdeg: Weerar Dhabba Gal Ah oo Loo Dhigay Kolonyo Ciidamada Amisom Ah.
Ciidamada Xarakada Al-Shabaab ayaa goor dhow weerar dhabba gal ah u dhigay kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada shisheeye Amisom. Wararku waxay sheegayaan in weerarku uu ka dhacay degaanka lagu magacaabo Ceel-wareegow oo u dhow Nambar Lixdan, waxaa dhacay qaraxyo iyadoo rasaas badanna laga maqlay halka uu weerarku ka […]
Degdeg: Sarkaal Ka Tirsan Puntlnd oo Lagu Dilay Gaalkacyo.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in weerar qorsheysan oo caawa dhacay lagu khaarajiyay sarkaal ka tirsanaa ciidamada Daraawiishta ee maamulka Puntland. Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijiyay in rag hubeysan ay si gaadmo ah u dileen sarkaal sare oo lagu magacaabi jiray […]